Wuxuu Illaaway Dhammaan Wixii Noloshiisa la Xidhiidhay, Xataa Qoyskiisii | Togdheer News	Home
Connect on Facebook	3:02 pm | Posted by kayse Wuxuu Illaaway Dhammaan Wixii Noloshiisa la Xidhiidhay, Xataa Qoyskiisii
Nin la yidhaa Mr. Charlie Wilson oo ku nool nolol aad u sarraysa, kuna shaqaysta xirfadaha maamulka xisaabaadka oo uu ku helo lacag malaayiin doolar gaadhaysa, ayaa waxa si kedis ah ugu dhuftay cudurka waax-qallalka, kaasoo illowsiiyey dhammaan marxaladihii kala duwaan ee uu soo maray tan iyo maalintii uu dhashay.
Mr. Charlie ma xasuusan karo guurtii uu guursaday, xaaskiisa lafteeda iyo laba carruur ah oo u dhalay, mana garanayo 20 sanno oo uu ka shaqaynayey xisaabaadka oo uu ahaa maareeye bangi, xataa isaga qudhiisa ayaan is garanayn cidda uu yahay.
Ninkan dhibaatada caafimaad-darro ku habsatay oo u dhashay dalka Scotland waxa ku adag inuu aqoonsado qof ka mid ah qoyskiisa.
“Gabadhan baan eegay, waxaanay igu tidhi; waa anigii, waxaanan ahay xaaskaagii Jackie, balse wax fikrad ah kama haysto cidda ay ahayd,” ayuu yidhi Mr. Charlie.
Xaaskii Jackie oo labadeeda carruur ah aabbahood cusbitaalka ugu gaysay maalintii ku xigtay markii cudurkani haleelay, waxa uu aqoonsan waayey qoyskiisa, isagoo ka arrintaas ka hadlayeyna waxa uu yidhi; “Waan eegay, waxaanan u maleeyey in ay meel uun igala xidhiidhaan, laakiin wax macluumad ah kamaan haysan, magacyadooda ma garanayo. Gabadh yar baa xaggayga u soo dhaqaaqday anigoo eegaya, Jackie-na dhawr jeer bay magacyadooda ii sheegtay iyo da’doodaba. Dadkan i khasbaya waan la yaabbannaa, caruurtaydiinna way iga cadhoodeen. Waxaan arkay Jackie oo ilmada ka tiraysa. Ubadku waxay markii guriga la igu waday lahaayeen aabbo miyaanad na garanayn? Hooyo nama garanaayee, ilaa afar sanno oo noloshayda dambe murugo ayey ku jireen,”
Inkastoo Mr. Charlie aannu waayin oo keliya xasuusta, laakiin wuxuu waayey dhammaan dareemayaasha dhinaca midig ee jidhkiisa laga bilaabo wejiga ilaa baabacadda hoose ee lugta midig, sidoo kalena labada indhood ee geestaa waxba kama arko.
Mr. Charlie oo 49 jir ah waxa uu sheegay inuu noloshiisa oo dhan ku mashquulsanaa shaqo, shaqadii badnaydna cudurkan ku keentay, isagoo xusay in maalin kasta shaqayn jiray 16 saacadood oo xidhiidh ah.
Xisaabiyahan xannuunku naafeeyey waqtigan oo xaaladdiisa caafimaad ka soo raynayso waxa uu awood u leeyahay inuu cuntada samaysto, waxyaabaha aasaasiga ahna qabsado
“Imminka aad baan u faraxsanahay oo wax baan yara dareemayaa. Xaaskaygu dedaal dheeraad ah ayey ii gashay, muddudaasna way ila soo silcaysay, abaal weyn bayna caafimaadkayga ku leedahay,” ayuu yidhi Charlie.